Hagahan waxa uu ka hadlayaa oo ku saabsan sida ay u wada rujin Samsung Galaxy S GT-I9000 la Android 2.3.6 XXJVU firmware. Haddii aadan isticmaalaya noocan ah phone, ma waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoose si aad u rujin. Fadlan ka raadi xal kale rooting adigoo isticmaalaya sanduuqa raadinta ee website-kayaga.
Talooyin aad kahor inta aanad bilaabin,
1) oo keliya ayaa u Galaxy S GT-I9000 la Android 2.3.6 XXJVU firmware, ha isku dayin qalab kale iyadoo la eegayo aasaaska tilmaanta.
2) afjarno ka tirtiri doonaa damaanad aad telefoonka ee (waxa kale oo aad ku celin kartaa dib ay ku rakibidda ay firmware stock).
3) Hubi in batteriga aad telefoonka ee ka badan tahay 70%, waxaad la hubiyo geeddi-socodka ah rooting siman.
4) si adag loo raaco tallaabo kasta oo ku hago. Caadi Ha bareesada ka xidhiidhka ka USB cable inta ay socoto.
5) Wondershare ma qaadan resposibility wixii waxyeelo ah sababay in qalab aad inta lagu jiro nidaamka. Waxaan kaala talin Read buuxda oo faahfaahsan oo ka mid ah tallaabooyinka hoose. Haddii aad qabto su'aal kasta ama shaki, fadlan ku daaya qayb comment ka hoose ee buugan.
Qalabka aad u baahan tahay rooting:
Tallaabada hagitaan talaabo talaabo:
Tallaabada 1. Waraaqda faylka: CF-Root-XX_OXA_JVU_2.3.6-v4.3-CWM3RFS.zip. Dabadiisna, waxaad heli doontaa nooc ka mid ah file .tar.
Tallaabada 2. Waraaqda faylka: Odin3.zip, oo waxaad heli doontaa file a .exe.
Tallaabada 3. Switch off telefoonka (ha ku xidhin your computer).
Tallaabada 4. Riix Volume Down + Home + Power wada badhamada qiyaastii 5 ilbiriqsi, ka dibna waxaad heli doontaa la gelin doono Download Mode (logo screen jaale muuqan doonaa wakhtigaas).
Tallaabada 5. Run Odin3 by double magcaabo faylka .exe on your computer.
Tallaabada 6. Markaas connnect aad Galaxy S2 in kombiyuutarka la cable USB ah. Marka uu ku xiran, aad arki doonaa in mid ka mid ah aqoonsiga: box COM on dariishaddii Odin3 noqon doonaa jaalaha ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan fiiri sanduuqa jaalaha ah, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo wadayaasha USB (ka soo bixi halkan ) ee telefoonka. Markaasay isku dayaan tallaabadaas mar kale. Haddii wax walba waa Ok, aad si toos ah u tegi kartaa tallaabada xigta.
Tallaabada 7. Sax off sanduuqa hor PDA ee Odin3, ka dibna waxaa lagu weydiin doonaa in aad ku shuban file ah. Browse in file .tar in idinka soo hor. Dooro oo ku shuban.
Tallaabada 8. Guji ka Start button on Oden ah. Wakhtigan, habka xidid bilaabmin.
Tallaabada 9. Marka habka xididka dhamaado, telefoonka reboot doonaa. Hadda barkinta aad telefoon si kombiyuutarka. Hadda telefoonka ayaa la rujin, oo aad samayn karto wax kasta oo aad rabto in aad la.
> Resource > Talooyin Root > Sida loo xidid Galaxy S GT-I9000 la Android 2.3.6 XXJVU firmware